Maamulka Koonfur Galbeed oo taageeray Xulafada Dalka Sacuudiga uu horkacayo,, | Banaadir 24 online
Maamulka Koonfur Galbeed oo taageeray Xulafada Dalka Sacuudiga uu horkacayo,,
Maamulka Koofur Galbeed ayaa taageeray isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, iyagoo sheegay in go’aankii dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada khaliijka in aan laga tixgelin, isla markaana lagala tashan.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Imaaraadka iyo Sacuudiga uu ka dhaxeeyo Soomaaliya xiriir iskaashi oo taariikh leh, sidoo kale waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka in Imaaraadka uu Soomaaliya ka taageerayo dhinacyada bani’aadanimada, caafimaadka iyo gargaarka deg dega, dadka ku nool dhamaan gobolada dalka oo dhan.
“Go’aanka dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada Khaliijka bishii June 2017 wuxuu ahaa mid aan laga tixgelin lagana tashan dhamaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo shacabkooda ee ay saameynta ku yeelaneyso”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Sidoo kale War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in shirkii Hoggaamiyeyaasha qaran ee bishii July ay ku caddeeyeen mowqifkooda, isla markaana aan dhex dhexaad laga noqon karin xiisada khaliijka, waxaa war saxaafadeedka lagu yiri in dowladda Federaalka ka codsadeen inay dib u eegis ku sameyso go’aanka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka.
War saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Koofur Galbeed ayaa ku soo beegmaya, iyadoo Madaxweyne Shariif Xasan uu ku sugan yahay magaalada Dubai ee dalka isu tagga Imaaraadka Carabta
Hadaba war saxaafadeedka ka soo baxay Xafiiska ayaa sidan u qornaa
Send post to email address, kaufen viagra comma separated for multiple emails.